बढ्यो एनजिओहरुको सक्रियता (सम्पादकीय)
कोरोना कहरवीच प्रायः ठप्प बनेको जिल्लाका गैर सहकारी संस्था (एनजिओ)हरु अब धमाधम आफ्ना गतिवधी वढाएको छ ।जिल्लामा सक्रिय रहेका एनजिओहरुले समुदाय स्तरमा छलफल, अन्तरक्रिया, प्रशिक्षणका कार्यक्रमको थालनी गरेको छ । कोरोना कहरकावीच ल ...
छिमेकी मुलुक भारतको जयनगरदेखि जनकपुरधामसम्म दुई वटा इन्जिन र डब्बा सहित परीक्षण रेल संचालन गरिएको छ । रेल आउने र संचालन हुने लामो समयदेखि प्रतिक्षा थियो । रेल संचालन गर्ने प्रयाप्त तयारी गरी आउनु पर्ने थियो । तर सरकारी हतारोक ...
यातायातमा कोभिड–१९ सुरक्षा ? (सम्पादकीय)
प्रशासकीय अधिकृतको पहल (सम्पादकीय)
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधीले नेतृत्व सम्हाल्दै आईरहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन अन्र्तगत तेस्रो चरणमामा प्रदेश २ का १३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन भए ...
लागुऔषध सेवन रोकौं (सम्पादकीय)
सिरहा जिल्लामा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या वढ्दै गएको छ । कोरोना भाईरसको संक्रमण रोक्न भारतसँग सिमा सिल गरिएको छ । संक्रमण रोक्न गत चैत ११ देखी सिमा सिल गरिएर ठूलो संख्यामा सशस्त्र सिमा सुरक्षा बलको तैनाथी गरिएको छ ।सशस्त्र ...
बजार अनुगमनमा खोई ? (सम्पादकीय)
कोरोनाको महामारीवीचमा जिल्लामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ । खाद्यन्नदेखि सागसब्जीमा उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएका छन् । बजारहरुमा कालाबजारी भैरहेको छ । व्यापारीहरु आफू अनुकुल बजार भाउ कायम गरी बिल बिनाको सामग ...
सिरहाको लहानमा राजनीतिक खिचातानीले गर्दा फोहर व्यवस्थापनमा चर्को सकस परेको छ । लहान नगरपालिकाले व्यवस्थपान गर्न नसक्दा नगरवासीले दुर्गन्धित वातावरणमा श्वास लिनु परेको छ । संविधान २०७२ मा मौलिक हकमा ‘स्वच्छ र स्वस्थ ...
अहिले खेतमा पानी नहुँदा धानबाली फस्टाउने हो कि नाई भनेर कृषकहरु चिन्तित छ । कोरोना कहरका बीच कृषकहरु चुनौती मोलेरै भएपनि धानबाली लगाएका छन् । आकाशे पानीको भरमा जिल्लामा धान खेती हुँदै आएको छ । कमला नहर पूर्वी सिचाई प्रणाली अन ...
कोरोना भाईरसको संक्रमण रोक्न सरकारले गत चैतमा लकडाउन गरेको थियो । लकडाउन भएसँगै सजगता अपनाउने गरी मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाईज गर्ने कुराले विस्तारै गति लिएको थियो । लकडाउनकै क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिन ...
खुला मदिराको व्यापार (सम्पादकीय)
सिरहाको सखुवानन्काकट्टी र नवराजपुरमा गाउँपालिकामा एक सातामा ८ जनाको मृत्यु भएका घटना सार्वजनिक भएको छ । मृत्यु भएकाहरु विपन्न गरिब परिवारका रहेका छन् । आर्थिक आय कमजोर भएका परिवारका व्यक्तिको मृत्युको घटनाले तरंगित तुल्याई दि ...